Daily Archives 18th April 2018
सोल्टी होटलबाट सञ्चालकसहित ८ जना समातिए
18th April 2018 | Comments Off on सोल्टी होटलबाट सञ्चालकसहित ८ जना समातिए
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले होटल सोल्टीमा रहेको माजोङ क्यासिनोका सञ्चालकसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । माजोङ क्यासीनोमा नेपालीलाई जुवा खेलाइएको सूचनाका आधारमा मंगलबार राति पुगेको महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले जुवा खेल्ने र खेलाउने कार्यरमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता मोहनकुमार थापाले दिएको जानकारी अनुसार, पक्राउ पर्ने ६ जुवाडे हुन् भने २ जना क्रमशः सञ्चालक र म्यानेजर हुन् । प्रहरीले ४५ वर्षीय विनोद श्रेष्ठ र ओम कर्माचार्यलाई पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठ क्यासिनोका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् भने कर्माचार्य कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्यसैगरी, जुवा खेलमा संलग्न मकवानपुरका विकल्प पोखरेल, ललितपुरका शिखर पौडेल, काठमाडौंका तेन्जिङ मेलेकलाई
क्यान्सरपीडितलाई अनिलाको संयोजत्वमा ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ सहयोग
18th April 2018 | Comments Off on क्यान्सरपीडितलाई अनिलाको संयोजत्वमा ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । क्यान्सरपीडित १६ वर्षीय विपिन राईलाई ४ लाख ४ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ थप उपचार खर्च जुटेको छ । सो रकम बेलायतमा बस्दै आएकी गायिका तथा समाजसेवी अनिला राईले ‘विपिनलाई बचाऔं अभियान’मार्फत जुटाएकी हुन् । अनिलाको संयोजत्वमा संकलित उक्त रकम मातातिर्थ औसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन पारेर सोमबार पीडितका बाबुआमालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सो रकम ललितपुरस्थित बिएफबिएस रेडियोको कार्यलयमा अनिलाको आमा सत्यवति राई, बाबु गंगाराम राई र मनहरी चाम्लिङले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । युकेमा बसेर पनि नेपाली संगीतमा निरन्तर अगाडि बण््दै आएकी अनिलाले उक्त रकम विभिन्न सयहोगी व्यक्तित्वहरुबाट संकलन गरेकी हुन् । स्थानीय सोलुका
आज अक्षय तृतीया पर्व, सर्वत र सातु दान
18th April 2018 | Comments Off on आज अक्षय तृतीया पर्व, सर्वत र सातु दान
काठमाडौं । वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज स्नान, जप, तप, हवन, दान गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ । आजका दिन गरिएको दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिल्यै नष्ट नहुने भएकाले वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो । मत्स्य पुराणलगायत ग्रन्थमा आजका दिन गरिएको कर्म फलदायी हुने बताइएको छ । यसै दिन त्रेता युगको शुरुवात भएको मानिन्छ । शिव र पार्वतीका बीच विवाह पनि वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीयाकै दिन भएको शास्त्रमा उल्लेख छ । आज माटो, तामा वा पित्तलको घडामा सर्वत राखेर ब्राह्मणलाई दान गरिन्छ । यस्तो घडामा ब्रह्मा, विष्णु र शिव तीनै स्वरुपका भगवान्को
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीनमा
18th April 2018 | Comments Off on परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीनमा
बेइजिङ । चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले स्वागत गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीको सम्मानमा दूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा उहाँले नेपालले संविधान जारीसँगै पछिल्लो तीन वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको अवगत गराउँदै संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै चीनले नेपालको हरेक क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको सरहाना गर्नुका साथै आगामी दिनमा समेत अझ बढोत्तरी हँदै जाने अपेक्षा गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल चीनको शान्तिपूर्ण विकास देखेर खुशी हुनुका साथै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विश्व मामिला प्रवद्र्धनमा चीनको बढ्दो भागिदारीका साथ विश्व आर्थिक
चिनीको भन्सार दर शतप्रतिशत बढ्यो
18th April 2018 | Comments Off on चिनीको भन्सार दर शतप्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको हालको भन्सार दरमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । चिनीको हाल भन्सार दर १५ प्रतिशत कायम रहेको छ । नयाँ भन्सार मूल्य अब तुरुन्तै लागू हुने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । सरकारले उखुको मूल्यमा प्रति क्वीन्टल पाँच रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले वृद्धि गरेको छ । उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको हो । हाल उखु प्रति क्वीन्टल ५३१
हराएकी किशोरी मृत भेटिइन्
18th April 2018 | Comments Off on हराएकी किशोरी मृत भेटिइन्
बुटवल — रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका-६ नरेनापूरकी एक किशोरी मृत भेटिएकी छिन् । १४ वर्षे सरस्वती हरिजन घरबाट झण्डै एक किलोमिटर पर खेतमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । हिजो राति करिब ९ बजे शौचालय जान भनेर घरबाहिर निस्केकी किशोरी हराएकी थिइन् । घरपरिवारले घर वरिपरि खोजी गरेपनि प्रहरीलाई खबर गरेका थिएनन् । हराएकी किशोरीलाई आज बिहान साढे ८ बजेतिर खेतमा मृत अवस्थामा स्थानीयले देखेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डिएसपी डिल्लीनारायण पाण्डेले बालिकाको हत्या के कारणले भएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । किशोरीको मुख र खुट्टामा चोट लागेको छ । उनको गुप्तांगबाट समेत रगत निस्केको छ । स्थानीयले
कसरी बन्यो सिंहदरबार ?
18th April 2018 | Comments Off on कसरी बन्यो सिंहदरबार ?
काठमाण्डौ-चन्द्र शमशेरको २९ वर्षे शासनकालमा २८ वर्ष सिंहदरबारमै बित्यो र वि.स. १९८६ मंसिर ३० गते सोमबार उनको मृत्यु सिंहदरबारमै भयो। वि.स. १९५८ असार १० गते बुधबारका दिन चन्द्र शमशेर सत्तामा आए। सत्तामा आउनासाथ उनले आफ्ना निमित्त एक दरबारको आवश्यकता महसुस गरे प्रति रोपनी ९० रूपैयाँका दरले ३५० रोपनी जमिन सिंहदरबारका लागि खरिद गरे। निर्माण कार्य सुरू भयो। सुरूमा चन्द्र शमशेरले आफू बस्न लायकको ठिक्कको दरबार बनाउन चाहेका थिए। तर, बनाउँदा बनाउँदै भव्य दरबार निर्माण गराए। जेजत्रो दरबार बने पनि खर्च चाहिँ तत्काल ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्द्र शमशेरको त्यस दरबारको निर्माणमा खर्च भएन किनकि त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण काठ माठमाडौं
चरेशसहित एक वृद्ध पक्राउ
18th April 2018 | Comments Off on चरेशसहित एक वृद्ध पक्राउ
कञ्चनपुर-लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले एक किलो ५०० ग्राम चरेशसहित एक ७४ वर्षीय वृद्धलाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार साँझ भीमदत्तनगरपालिका–४ बसपार्क क्षेत्रबाट बझाङ छबिस पाथीभरा गाउँपालिका–४, कडेलका चन्द्रदेव जोशीलाई ब्यूरोको टोलीले चरेशसहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गरेका जोशीलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धानको कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटीले बताउनुभयो । (रासस)
मागपत्र बोकेर देउवाको चरणमा कम्युनिष्ट !
18th April 2018 | Comments Off on मागपत्र बोकेर देउवाको चरणमा कम्युनिष्ट !
हेटौंडा । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा मंगलबार दिउँसो रोचक राजनीतिक दृश्य देखियो । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्म हैसियत नभएको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गमक्क परेर कुर्सीमा बसिरहेका थिए । सत्तारुढ वाम नेताहरु उनै विपक्षी दलका नेतासमक्ष मागपत्र बोकेर उपस्थित भए । कांग्रेस सभापति देउवाको छेवैमा एमाले सांसद विरोध खतिवडा बसिरहेका थिए । एमालेबाटै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बनेका रघुनाथ खुलाल विपक्षी दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थिए । आफ्नै पार्टीको कार्यक्रमका लागि मकवानपुर पुगेका कांग्रेस सभापति देउवालाई जिससको अगुवाइमा विभिन्न दलका नेताहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । र, यसको अगुवाइ सत्तारुढ एमालेले गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री
एनआरएन स्वीडेनको अध्यक्षमा दिनेश कुमार श्रेष्ठ
पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई खुलापत्र…